Math valisoa valisoa | Martech Zone
Matetika valisoa matematika
Alakamisy 30, 2006 Alakamisy 30, 2006 Douglas Karr
Nanana karatra valisoa Border nandritra ny fotoana kelikely aho ary nahazo mailaka fotsiny fa manam-bola azoko laniana. Niditra an-tserasera aho ary nisoratra anarana tamin'ny tranonkalany. Amin'izay fotoana izay dia te-hisaotra ahy tamin'ny fisoratana anarana izy ireo ary nanome valisoa ahy tamin'ny iray amin'ireo safidy telo:
20% amin'ny singa iray rehefa mandany $ 20 na mihoatra aho
Zava-pisotro mafana 12oz maimaimpoana
$ 10 rehefa mandany $ 50 na mihoatra aho
Misy mahatsapa vazivazy fa mitovy ny # 1 sy # 3? Raha mandany $ 50 aho, tsy tokony hihoatra ny 20% ve ny fandrisihana?
Angamba izaho irery io. Ankasitrahako anefa izany! Ary… tena tiako ny sisintany!
PersonalDNA - Tantaran'ny maha-izy anao
Fitsipi-pitenenana amin'ny tambajotra sosialy - Aza SNOB
Mar 6, 2007 ao amin'ny 10: PM PM
20% miala $100 = $20 miala
$10 miala 100 = $10 miala
Aug 9, 2007 amin'ny 2: 07 AM
Izany no mahatonga ny lohateny hoe 'matematika valisoa amin'ny sisintany', izany hoe, tsy misy tombony velively ny manala ny $10 amin'ny tapakila $50 na mihoatra.
Janoary 4, 2011 amin'ny 2:11 PM
Ny fahasamihafana eo amin'ny 1 sy 3 dia ny #1 dia azo ampiharina amin'ny singa iray ihany. Ny #3 dia ho an'ny entana tsy voafetra.